सरकारले रो.केर हामी रो,किनेवाला छै.नौं अब गा.डी नि.काल्छौं : बस स.ञ्चालक कmम्पनी
सरकारले रो,केर हामी रो,किनेवा.ला छै.नौं अब गा.डी नि.का.ल्छौं : बस स,ञ्चालक क,म्पनी
पोखरा । पृ.थ्वीराजमार्ग बस स,ञ्चालक क!म्पनी पा,इभेट लि,मिटेडले असोज १ गतदेखि आफ्ना स,वारी स,ञ्चालनमा ल्या,उन तया,री था,लेको छ । पृ.थ्वीराजमा.र्ग बस स,ञ्चालक कम्प,नीका अ,ध्यक्ष यो.गेन्द्रबहादुर केसीले सर,कारले सा,र्वजनिक या,तायात स,ञ्चालनको लागि अ,नुमति न,दिए पनि स,वारी स,ञ्चालनमा ल्याएरै छा,ड्ने ब,ताए । ‘हाम्रो स्प,ष्ट कुरा १ गतेदेखि गा,डी नि!काल्छौं । सरकारले नच,ला भने पनि हामी गाडी च,लाउँछौं । उ,च्च सु,रक्षा स,र्तकता अ,पनाएर गाडी चला,उँछौं,’ उनले भने, ‘स!रकारले रो,के.र हामी रो,किनेवा,ला छैनौं ।’
अध्यक्ष केसीले सरकारले आ,फूहरुमा,थि का,रबाही थाले पनि त्यसको भा,गि!दार बन्न तयार रहेको बताए । कुनै पनि हा,लतमा नि,र्णयबाट पछि नह!ट्ने उनको अ,डान छ । १ सय ७० दिन लामो ब,न्दाब;न्दीमा ब,स्दा राज्यले कुनै रा,हतको पनि व्य,वस्था नग,रेको भ,न्दै उनले गु,नासो पो,खे । बैंक तथा वि,त्तिय सं!स्थाको बारेमा पनि स्पष्ट नीति न,ल्याउँदा या,तायात म,जदुरहरु भो,कै म,र्नुपर्ने अ,वस्था आएको जि,किर गरे । ‘गाडी घर राखेर क,बाडी बनाएर हाम्रा म,जदुरलाई भो,कै रा,खेर मा,र्ने र म,र्ने प,क्षमा हा,मी छैनौं । अब हामी भो!कले म,र्ने भन्दा को,रोना रो,गले म,र्न त,यार छौं,’ उनले भने, ‘राज्यले के बुझोस् भने बि,रालो,लाई थु,नेर राख्यो भने त्यसले घाँ,टीमा स,मा,त्छ भने जस्तै, कुनै पनि ब!हानामा हामी कुनै पनि स,वारी सा,धन रो!क्न स,क्दैनौं ।’
सा!र्वजनिक या,तायात सञ्चा,लनमा थु,नछे,क भई रहँदा प्रा,इभेट गाडीहरुले भने नि,र्वाध रुपमा या!त्रु बो,केको उनको आ,रोप छ ।
उनले पू,र्ण रुपमा सु,रक्षा स,र्तकता अ,पनाएर या,तायात स,ञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । दुई वटा सि,टमा एक जना मात्रै या,त्रु राखेर स,वारी सञ्चा,लनमा ल्या,उने उनले सुनाए । ‘४० सिटमा २० जना मात्रै मान्छे राखेर हामी स,ञ्चालन गछौं भन्दा हामीलाई रो!क्न पर्ने कारण के हो ? त्यो हामीले बु,झ्न स!किरहेका छैनौं । स!रकारको हा,मीप्र!तिको दृ,ष्टिको,ण के हो ? व्य,वसायीप्र,तिको दृ,ष्टिकोण के हो ? त्यो हामीले बु,झ्ना सकि रहेका छैनौं,’ उनले भने ।
उनले या,तायात व्यव!सायी कसैको प्र,लोभनम, त्रा,स, द,बा,बमा परेर स,वारी घरैमा थ,न्क्याएर नराख्ने जि,किर गरे । राज्यले केही गरेन भनेर बस्नुभन्दा को,रोनाको सा,मना गर्न आफूहरु त,यारी अ,वस्थामा बसेको उनले बताए । पृथ्वीराजमार्ग बस व्य!वसायी कम्प,नीले सञ्चालनमा आउने तया,री थाले पनि पोखरा बस व्य!वासायी कम्प,नीले भने सरकारी नि,र्णय पर्खेर बसेको छ । या,तायात स,ञ्चालनस,म्बन्धि स!रकारको स्प,ष्ट धा,रणा आ,एपछि मात्रै सञ्चा,लनमा आउने कम्प,नीका अध्यक्ष दे,उप्रसाद गुरुङले बताए । जिल्ला सं,कट व्य,वस्थापन केन्द्र का,स्कीको बै,ठकले २ हप्ता ला,मो नि!षेधाज्ञापछि २ हप्ता खु,कुलो नि,षेधाज्ञा जा,री गरेको छ । जसको भदौ २७ गते रा,ती १२ बजे म्या!द सकिदै छ ।प्र,मुख जिल्ला अधिकारी ज्ञा,नप्रसाद ढ,कालले या,तायात स,ञ्चालन अ,नुमति बारे कुनै नि,र्णय न,भएको जा,नकारी दिए ।